galmada - iftineducation.com
iftineducation.com – Sida la ogyahay dadka way kala duwan yihiin dooq ahaan, dad waxay ka helaan gabdhaha buuran dadna waxay jecelyihiin gabdhaha caatada ah dad na waa itus haba ii madoobado ama ha i cadae mel un madaxa ii gali,
naaso-weyn ogoow caatada waxa ay kala ahaan karaan caato qoray ah ama caato shushuban oo waji la qoray leh qaloocan xoga baruur badan aan la heyn dhabarkana ka siman o shape ka ah, kuwa nuucas ah waxa ay ku wacan yihiin [Dogy style] 2caatada qoray ga ah waxa ka bixi kara raga aadka u qalabka weyn waxa ayna xamili kartaa ninkasta ,iyadoo sidoo kale ay san horay ka qanceenin,
Balse markaan u eegno sida ay u badan yihiin Raga waxay jecel yihiin naagaha buuran oo gadaal u weyn.
Oo marka ay socoto u socoto koofur bari bari ,naagta marka ay sidaa tahay nimanka dareenkooda aad bay u soo jiidataa, qaarba ku taama war ma labooda oo sida lagii ma u qaniina baridaaas . qaar waxa ay ay isha la raacan jirkaas nuux nuuxsanaya laakin naagaha caatada ah uma soo jiidan karaan sida kuwa buuran nimanka u soo jiita, balse waxa dhici karta in waji furan san dhalaalaya ay leeyihin kuwa catada . halka kkuwa buuran laga yaabo in jir bali ah lagu xusho walow ay jiraan kuwa dhax dhaxaada,
QAARKA KALE ee raga ma damcaan gabar caato ah, haddii ay arkaan gabar buuran aad bay wax u dareemaan, laakin gabadha buuran hal ceeb ayay leedahay taasi waxay tahay marka galmo lala samaynayo sida la rabo lama yeeli karo qaababka galmada oo dhan laguma fulin karo laakin gabadha caatada ah si kaste way samayn kartaa waayo way kala baxsantahay wax ku celinayana lama arko. xaga nadaafada inkastoo dadku isku mid aheyn hadana mida caatada waxa ay ka dhidid iyo dhacaan yartahay mida hilib ku maasheeyay ee la moodo isbuunyo naf la galshay taas oo aad ugu wanaag san gal mada dhac diiid ka ah,
Gabdhaha caatada ah ama shushuban waxa ku suu ro beysa inaa dan ku caajisin adigoo hadba dhinacya badan u qaad qaadan karo , iyagoona si sahlan isugu ruxi kara dakar ka labka waxaana la sheega gabadh caato ah hadana gaaban inay ka weyrar kulusha hay kuwa kale.
dumarka kacsiga badan